Gudoomiyaha Gobolka Nogob Oo Tababar Ufuray Hogaaminta Hoose Ee Degmada Fiiq - Cakaara News
Gudoomiyaha Gobolka Nogob Oo Tababar Ufuray Hogaaminta Hoose Ee Degmada Fiiq
Jigjiga(CN), Isniin 17ka August, XDSHSI oo ah mid ay ka go'antahay inuu kamidho dhaliyo qorshayaashiisa horumarineed ayaa had iyo jeer lagarab taagan heerarka kaladuwan ee hogaamintiisa tababaro lagu kobcinayo garaadkooda. Tababarkanina ma aha mid hada uun lagu bilaabayo hogaaminta hoose ee degmooyinka ee waa mid mudo soo socday oo lagasoo dhaadhiciyey-hogaaminta sare, soona maray hogaaminta dhexe ilaa hada uu marayo hogaaminta hoose.
Hadaba, Gudoomiyaha Gobolka Nogob mudane Cabdi Cali Mataan ayaa saaka tababar ufuray 187 xubnood oo laga soo kala xulay 17 qabalee iyo qabalee hoosaado degmada fiiq hoos yimaada.
furitaankii tababarkan ayuu gudoomiyuhu usheegay tababartayaasha in tababarkani muhiimad gaar ah uleeyahay maamulada qabaleeyada iyo qabalee hoosaadyadaba oo uu kobcinayo garaadkooda siyaasadeed iyo kooda aqooneedba. wuxuuna kubooriyay tababartayaasha inay si fiican uga qaybqaataan dhagahana ufuraan casharada lasiinayo. wakhtigana ilaaliyaan.
Tababarkan oo soconaya mudo 10 maalmood ah ayaa lagu qaadan doonaa casharo ay kamid yihiin: sooyaalkii taariikheed ee XDSHSI uu soo maray, nidaamka federalismka ah, isabadalada dib ucurashada dalka kahanaqaaday IWM.
Sidoo kale, waxaa iyana dhankooda kahadlay tababartayaasha oo hadalka kusoo gunaanaday in tababarkani uu muhiim wayn uleeyahay oo ay kafaaiidaysan doonaan kaalintooda kaga aadan barashada iyo kudhaqanka danbana kasoo bixi doonaan.